Bangladesy - Wikipedia
I Bangladesy na ny Repoblika Entim-Bahoakan' i Bangladesy, dia firenena ao amin'ny zana-kôntinenta indiana, izay hita ao avaratry ny Helodranon'i Bengaly, saika mitoka-monina ao India, mitambatra sisintany amin'i Birmania. Midika hoe "tanin' ny Bengaly" io anarana io. Atao hoe Gônoprojatontri Bangladesh, amin'ny fiteny bengaly.
Ny sisintaninny faritra izay mamorona an'i Bangladesy ankehitriny dia vokatry ny fitsinjarana an'ireo India tamin'ny taona 1947, rehefa lasa isan'ny teny fehezin'i Pakistàna izay lasa Repoblika Islamikan'i Pakistàna tamin'ny taona 1956. Ny fifamatorana nisy teo amin'ny ampahany roan'i Pakistàna, izay miorina amin'ny maha samy iray fiovavahana azy ireo, dia ny finoana silamo, dia tsy nateza noho ny elanelana 1 600 km manasaraka azy ireo. Voan'ny fanavakavahana ara-politika sy ara-piteny i Bangladesy, satria nanambara i Pakistàna fa ny fiteny ordo no atao fieny ôfisialy, ary satria koa tsy niraharaha ny toekaren'io faritra io ny mpitondra pakistaney tandrefana, ka nahatonga ny Bengaly ao Pakistàna atsinanana hanambara ny fahaleovan-tenany tamin'ny taona 1971, izay notohanan'ny Firaisana Sôvietika. Niteraka ady mahery vaika izany ka nahafaty olona miisa 3 tapitrisa any ho any sy olona nifinfdra monina nila fialokalofana miisa 10 tapitrisa sy fanaovana an-kriny vehivavy miisa 200 000 any ho any.
Ny hakitroky ny mponina dia mahatratra 1 251 isaky ny kilômetatra toardroa, ka mahatonga an'i Bengladesy ho firenena manana mponina mikitroka indrindra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangladesy&oldid=1040735"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 14:29 ity pejy ity.